Namaste Host News – Page2– नेपालकै पहिलो आधिकारिक होस्टिंग कम्पनि द्वारा संचालित
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल चढेको हेलिकोप्टर पाल्पामा आकस्मिक अवतरण
सिंगापुर, हङकङ र कतारका बजारमा पुग्‍यो नेपाली लसुन
गोक्ते काजी’ रियलमा पनि काजी जस्तै, २० करोडको मालिक उनको घर पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
October 17, 2019 adminLeaveaComment on गोक्ते काजी’ रियलमा पनि काजी जस्तै, २० करोडको मालिक उनको घर पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित कलाकार ‘गोक्ते काजी’ मेरी बास्सै टेली सिरियलका चर्चित पात्र हुन् । उनको वास्तविक नाम भने राम चन्द्र अधिकारी हो । मेरी बास्सैमा उनि काजीको भूमिका यानिकी गाउको अलि धनि पात्र हुन् । उनि टिभी सिरियलमा जस्तो भूमिकामा चिनिन्छन उनि वास्तविक जिवनमा पनि काजी नै छन भन्ने धेरैलाई थाहा नहोला । उनि गाउको […]
October 17, 2019 adminLeaveaComment on ख्याल गरौं शरीरमा आउने मुसा क्यान्सरको कारण हुनसक्छ
तपाईंको शरीरमा मुसा आएका छन् । यदी छन् भने सचेत हुनुहोस र चाँडै यसको उपचारमा जुट्नुहोस् । किनभने चिकित्सकहरुले शरीरमा आउने मुसा क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्ने बताएका छन् । सामान्य रुपमा छाला बिगार्ने जस्तो देखिए पनि मुसाले क्यान्सरको संकेत गर्ने भएकाले सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसैले शरीरमा मुसा फैलिएमा अलि सचेत हुन आवश्यक छ […]
ज्वाईंले छोडेका साजनलाई प्रमोद खरेलको साथ, नयाँ गीत ल्याउँदै
October 16, 2019 adminLeaveaComment on ज्वाईंले छोडेका साजनलाई प्रमोद खरेलको साथ, नयाँ गीत ल्याउँदै
२९ असोज, काठमाडौं । दोश्रो सिजनको भ्वाईस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनबाट छानिएका प्रतिस्पर्धी हुन् साजन थापा । ब्लाइन्ड अडिसनमा टीम प्रमोदमा छानेका उनले त्यसपछिको ब्याटल राउण्डमा उनकै ज्वाईं मधु लामासँग ब्याटल पर्‍यो । ब्याटलमा उनीहरुलाई प्रमोद खरेलकै गीत परेको थियो । शुरुमा आनाकानी गरेता पनि उनीहरुले एकदमै दमदार ब्याटल गाए । दुवैले एकदमै दमदार प्रस्तुती […]
गर्दनको कालोपनलाई १५ मिनेटमै गोरो बनाउने सजिलो घरेलु विधि
October 15, 2019 adminLeaveaComment on गर्दनको कालोपनलाई १५ मिनेटमै गोरो बनाउने सजिलो घरेलु विधि
प्रय हामी अनुहारलाई गोरो बनाउन, दाग हटाउन जे विधि प्रयोग गर्न पनि तयार हुन्छ तर घाँटी, गर्दन वा हातखुट्टालाई गोरो बनाउने बारे धेरै सोंच्दैनौ।अनुहारका लागि महँगा ब्रान्डेड कस्मेटिक देखि घरेलु उपचार विधि सम्म अपनाउने हामीले घाँटी वा गर्दनलाई गोरो बनाउन त्यति प्राथमिकता वा ध्यान दिदैनौ।यसको फलस्वरूप कुनै कार्यक्रममा जाँदा आफैं लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ […]
सुर्य विनायकमा स्थापना गरियो पाथीभरा मन्दिर
October 15, 2019 adminLeaveaComment on सुर्य विनायकमा स्थापना गरियो पाथीभरा मन्दिर
भक्तपुर । भक्तपुरको सुर्य विनायक नगरपालिकामा पाथीभरा मन्दिर स्थापना गरिएको छ । नगरपालिकाको गुन्डुमा पाथीभरा देविको मन्दिर स्थापना गरिएको हो । अहिले मन्दिर स्थापना भएपछि स्थानिय वासिन्दाहरु दर्शनका लागी जान थालेका छन । पाथिभरा माताको रुप भनेर सुर्य विनायक नगरपालिकाको गुन्डुमा पाथीभरा माताको मन्दिर स्थापना गरिएको हो । पाथीभरा माताको मन्दिर यस अघी ताप्लेजुङ बाहिर […]
आमाले छाडेर गएको डेढ वर्ष भैसक्यो, आमा आउने बाटो हेरिरहन्छन् यी अबोध बालक !
October 14, 2019 adminLeaveaComment on आमाले छाडेर गएको डेढ वर्ष भैसक्यो, आमा आउने बाटो हेरिरहन्छन् यी अबोध बालक !
यी हाँसे पनि सुख छैन, यिनले बिर्से नि आमा भनी।’ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले ‘गौरी’ शोक काव्यमा लेखेका उल्लिखित हरफ चीनमा हुर्किरहेका बालबालिकाकासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। अबोध बालबालिका हाँसे भने उनका अभिभावकले ठम्याउनेछन्– यिनले आमालाई बिर्सिए। कहिलेकाहीं उनीहरु रोए फेरि अभिभावकले सम्झने छन्– यिनले आमालाई सम्झिए।आफ्नी आमाको बाटो विशाल हिमालले छेकेको छ भन्ने ती अबोध बालबालिकालाई […]
अबदेखि “प्याड” नि: शुल्क पाइने
October 14, 2019 adminLeaveaComment on अबदेखि “प्याड” नि: शुल्क पाइने
काठमाडौं / महिनावारीका सुरु हुने बेला भएपछि कयौं किशोरीहरु विद्यालय जान डराउँछन् । कुन बेला पिरियड सुरु हुन्छ भन्ने भयले उनीहरु महिनावारीको समयमा विद्यालय जान चाहादैनन् । हाम्रा कतिपय विद्यालयमा वरीपरि स्यानिटरी प्याड किन्न सक्ने ठाउँ हुँदैन् । अझ धरै किशोरीहरुको अवस्था स्यानिटरी प्याड किनेर प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैन् । अब भने यि किशोरीहरुको यो […]
छ माया छपक्कै’ले तोड्यो छक्का पञ्जा ३ को रेकर्ड
October 12, 2019 adminLeaveaComment on छ माया छपक्कै’ले तोड्यो छक्का पञ्जा ३ को रेकर्ड
काठमाडौं / फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ले प्रदर्शनको पहिलो दिन शुक्रबार बम्परको ओपनिङ गर्दै नयाँ व्यापारिक रेकर्ड कायम राख्न सफल भएको छ । फिल्मका निर्माता दिपकराज गिरीले ‘छ माया छपक्कै’ले शुक्रबार ‘छक्का पञ्जा ३’ को भन्दा बढी ग्रस कलेक्सन गरेको बताए । यद्पी निर्माता गिरीले छ माया छपक्कैको शुक्रबारको एकिन ग्रस कलेक्सन भने खुलाउन चाहेनन् । […]
October 12, 2019 adminLeaveaComment on घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य तालामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ७० हजार चार सय रुपैयाँमा झरेको छ । सुन दशैंअघि प्रतितोला ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला आठ सय ४५ रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी दशैंअघि प्रतितोला आठ सय ५० रुपैयाँमा […]
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउने भएपछि, चीनबाटै आए सेना र विशेष कमाण्डो
October 12, 2019 adminLeaveaComment on चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउने भएपछि, चीनबाटै आए सेना र विशेष कमाण्डो
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउने भएपछि राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि नेपाली सेना ब्यारेकबाट निस्किएर मुख्य मुख्य सडकमा गस्ती गरिरहेको छ । सी हिड्ने मुख्य सडकहरु विशेष निगरानीमा राखिएको जनाइएको छ । राष्ट्रपति सीको सुरक्षाका लागि ४ तहको सुरक्षा घेरा निर्धारण गरिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रोमा नेपाल प्रहरी, […]